झापाको गौरादह ७ मा ग्रिनेट फेला – live 60media
झापाको गौरादह ७ मा ग्रिनेट फेला
झापाको गौरादह ७ मा ग्रिनेट फेला परेको छ । सोही ठाउँका भक्तबहादुर खत्रीले लगाएको टीकको बगान भित्र बालबालिकाले सो ग्रिनेट फेला पारेका थिए ।बगानमा चौपाया हेर्न गएका बालबालिकाले धमिराले खनेको माटो कोट्याउँदा शंकास्पद बस्तु देखे पछि अभिभावकलाई खवर गरेको र अभिभावकले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सो स्थानमा शंकास्पद बस्तु भेटिएको पुष्टि गरेको छ । सो शंकास्पद बस्तुलाई झापाकै चारआली स्थित नेपाली सेनाको गणबाट खटिएको टोलीले सुरक्षित रुपमा ‘डिस्पोज’ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिएका छन् । सो ग्रीनेट सशष्त्र युद्धकालिन हो वा अरु कसैले सो स्थान सम्म पुर्‍यायो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
काठमाडौं, सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरू गर्ने भएको छ। लाइसेन्स लिन चाहने नयाँ आवेदकले आगामी मंगलबारदेखि अनलाइन फारम भर्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागले बताएकाे छ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गरेसँगै बन्द रहेको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अझैसम्म बन्द थियो।
अब नयाँ आवेदकबाट अनलाइन फारम भरेर आएपछि मिति तोकेर लिखित र ट्रायल परीक्षा लिइने विभागले जनाएको हो। लामो समयदेखि नयाँ लाइसेन्सको अनुमतिपत्र वितरण बन्द रहँदा सेवाग्राही मर्कामा छन्। अब प्रादेशिक कार्यालयहरू मार्फत लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड ल्याएपछि विभागले मागका अनुपातमा प्रिन्टिङ क्षमता नबढाउँदा गत चैतसम्म करिब ८ लाख लाइसेन्स छाप्नै बाँकी थियो। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा ब्याकलगका ती सबै कार्ड छापिसकेर अब वितरण गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
देशभरका कार्यालयले परीक्षा लिएपछि लाइसेन्स छाप्न राजधानीस्थित विभागमै पठाउनु पर्छ। सीमित संख्याको प्रिन्टिङ क्षमताका कारण विभागले छिटो तयार गरेर कार्ड पठाउन सकेको थिएन। छाप्न बाँकी सबै काम सकिएकाले अब नयाँ जारी हुने कार्डमा भने ढिलाइ नहुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। विभागले अब नयाँ लाइसेन्स ट्रायल पास गरेको एक महिनाभित्रै दिनेगरी तयारी भइरहेको जनाएको छ।
← यीनै हुन २ युवा जसले गएराति गुल्मीमा ट्रक’को ठ’क्करबाट घटना स्थलमै ज्या’न गुमाए !
हेर्नुस बिहेपछि आज नन्दाले रमेश प्रसाई र परिवारलाई के गरिन्! तुरुन्तै हेर्नुस् →